Isanda kulungiswa umgangatho wegadi yabucala kwindlu entle yelifa. Iibhloko ezi-3 kuphela ukusuka edolophini. Indawo entle ekhethekileyo yokuphumla emva kokubuya kwimini yokuzonwabisa. Uya kuyithanda indawo yethu ngenxa yendawo esembindini, kunye neloji elipholileyo elifana nelokuziva. Le ndawo yindawo entle yezibini ezitshatileyo, abantu abahamba bodwa, kunye / okanye iintsapho ezincinci. Uyilo olulula nolusebenzayo, nendawo yokupaka ngaphandle kwesitalato, kunye nendawo eninzi yokugcina izixhobo. Le suite inelayisensi kunye nesixeko.
Le suite ikumgangatho osezantsi kwindlu esandula ukulungiswa, kwithuba lenkulungwane yendlu yelifa likaNelson. Indawo yokungena yabucala enefestile yeglasi. I-suite inendawo yokulala efana neempawu zemigangatho yeplanga, imiqadi kunye ne-slab shelving, i-gas flame cast-iron isitovu, kunye nezibane ze-jewel toned. Mna nomfazi wam kunye nentombi yethu encinci sihlala kwigumbi eliphezulu. Indawo yethu kukuhamba nje imizuzu embalwa ukuya kumbindi wesixeko, kunye nokufikelela kumathuba amangalisayo obugcisa nenkcubeko, kunye nemizuzu engama-20 kuphela yokuqhuba ukuya eWhiteWater Ski Resort. Indawo ihambelana nabantu abadala be-1-2 ngokukhululekile, kodwa inokuhlala ukuya kwi-4 kunye ne-futon yokukhupha ukuba kuyimfuneko (nangona kunjalo indawo iya kunqunyulwa). Ukongeza, ukuba uhamba nosana sinokubonelela ngePakethi kunye neDlala ibhedi. Qhagamshelana nathi ngeenkcukacha ezithe vetshe.
4.98 · Izimvo eziyi-94
INelson Garden Sanctuary ikwindawo ekhuselekileyo, kwaye ikufuphi kakhulu nedolophu yaseNelson, (malunga nomgama wemizuzu emi-3 ukuya eBaker St). Ubumelwane obujikelezileyo ubukhulu becala benziwe zizindlu zelifa lemveli zenkulungwane. Esi sithuba sisecaleni kwesikhululo sembali sikaNelson Fire (apho imuvi ka-1980 ethi 'Roxanne' noSteve Martin yafotwa khona).
INelson Garden Sanctuary lishishini eliqinisekisiweyo ngesixeko saseNelson BC.
Mna nenkosikazi yam uMonika siya kufumaneka kwaye sijonge phambili ekunikeni uncedo ukuba ufuna nantoni na ukuba sikhona, kwaye sihlala sikhona ngokuthumela imiyalezo.
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$276